Momba anay - Fuzhou Huaguang Color Printing Co., Ltd.
Fuzhou Huaguang Color Print Co., Ltd. dia orinasa fanontana sy fonosana matihanina manana traikefa 20 taona. Manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana mari-pamantarana marika avo lenta, boaty fanomezana, boaty fitehirizana taratasy, boaty PVC, kitapo taratasy. Eto izahay hanampy amin'ny zavatra rehetra hatramin'ny famolavolana ka hatramin'ny fanohanana ara-teknika.
Orinasa tsy miankina voafetra ny orinasa, indrindra ho an'ny orinasam-pamokarana afovoany sy avo lenta ary ny orinasa eropeana, amerikana, japoney any China ho mpanohana sy mpanorina.
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famolavolana sy fanamboarana karazana marika antonony sy avo lenta (ao anatin'izany ny marika anti-sandoka), karatra famantarana (ao anatin'izany ny karatra plastika), boaty miloko, boaty fanomezana sarotra, boaty fitahirizana, poketra.
Mba hahazoana antoka fa ara-potoana sy marina ny famatsiana entana ho an'ny mpanjifa, ny orinasa dia nandany vola be tamin'ny talenta sy fitaovana, nifantoka tamin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny fizotrany, ny fifehezana kalitao ary ny fanatsarana ny fizotran'ny fitantanana nentim-paharazana sy ny fizotry ny famokarana. Ampiharo ny famokarana voaomana sy ny tahiry fiarovana voaomana, hahazoana antoka fa manome serivisy fizarana amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra, serivisy feno amin'ny vanim-potoana vaovao, ny mpanjifa ankapobeny, avo lenta amin'ny fanatanterahana ny foto-kevitra fitantanana "zero inventory" hanao ny fandraisany anjara manokana, amin'ny fanatsarana izany ny fitantanana orinasa, ny fitantanana ny famokarana, ny fitantanana ny fividianana ary ny fikarakarana ny fitantanana ny warehousing ary manome dia afaka manampy amin'ny fampihenana ny fandaniana.
Mba hanomezana mpanjifa serivisy tsara sy vokatra avo lenta.
Ezaka, fiasa tsara, ambony, tombotsoan'ny tena, fiaraha-miasa mandresy fandresena.
Hatramin'ny nanombohan'ny fanontanianao, ny mpiasa rehetra ao amin'ny ekipanay dia efa niasa mafy hanome anao vokatra tsara. Avy amin'ny fanadihadiana, ny teny nalaina, ny baiko, ny famokarana, ny fifehezana kalitao, ny fonosana, ny fandefasana ary ny fandefasana farany, ny rohy rehetra dia mahazo tsara.
Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famolavolana sy fananganana karazana marika afovoany sy avo lenta (ao anatin'izany ny marika fanoherana ny sandoka), kara-panondro (ao anatin'izany ny karatra blister), boaty miloko, boaty fanomezana ary fonosana. Mba hiantohana ny faharetan'ny fotoana, ny fahamendrehana ary ny fiarovana ny famatsiana entana ho an'ny mpanjifa, ny orinasa dia nanambola vola be tamin'ny talenta sy fitaovana (fampidirana gazety milina UV miloko 6 miloko vaovao sy fitaovana famokarana boaty fanomezana feno), mifantoka momba ny fikarohana sy ny fampandrosoana ny seiko, ny famokarana Seiko, ny fifehezana kalitao amin'ny fizotrany manontolo, ny fanatsarana ny fizotran'ny fitantanana nentim-paharazana sy ny fizotry ny famokarana.
Izahay dia orinasa fanontam-pirinty sy fonosana matihanina. Efa 20 taona mahery izao izahay no nanao an'ity orinasa ity. Azonao atao ny mino tanteraka fa ny tanjakay sy ny traikefa anananay nandritra ny taona maro dia hanampy anay hamaha ny olanao rehetra momba ny vokatray. Raha liana amin'ny vokatray ianao dia aza misalasala mandefa mailaka anay raha misy fanontaniana momba ny vokatray. Hivaly anao faran'izay haingana izahay. Manantena ny hiara-miasa aminao izahay.